Manohana fa tsy tohanana… | NewsMada
Manohana fa tsy tohanana…
Hatramin’ny fotoana farany, ifanenjanana amin’ny sasany ny amin’ny firotsahan-kofidina amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Samy te ho voafidy, na samy te ho lohany aza. Iadiana mafy ny hoe: iza no atolotr’iza ary aiza? Ny eny anivon’ny antoko na vondrona antoko politika io…
Politika? Ady fiady… Rehefa tsy arotsaky ny antoko na vondrona antoko politika ny sasany nanantena be an’izany, mirotsaka amin’ny anarany manokana na tsy miankina. Lojika politika izay. Na hambom-po, ady fiady… Na izany aza, mahavalalanina sy mahafanina ihany ny raharaha. Nahoana?
Efa mandeha amin’ny anaran’ny tenany na tsy miankina ny sasany, mbola misolantsolana sy mitonon-tena ho miaraka na manohana an’itsy na iroa. Izany moa no inona? Tsy miankina fa mitady hiankinana, na efa notsipahin’ny antoko na vondrona politika izao aza: hivadika an’itsy na iroa izany?
Atao fotsiny aloha izay hahavoafidy ny tena, rehefa any vao hifampitady na hiady… Paipaika sy kajikajy politika, hono. Na inona na ahoana ho vokany, eo ny vahoaka hitsara sy hanapaka: miharihary ny hoe samy mandeha, samy mitady. Fitiavan-tena, fitiavan-tseza… ho tonga hatraiza?
Tsy hay ifampifehezana ahay izany ny antoko na vondrona politika. Izany no hoe etika politika? Izao aza no efa mivadibadika be ihany, vao mainka rehefa atsy ho atsy. Tsy mahagaga fa ireo efa mpivadibadika no hoe manohana atsy na aroa, fa tsy tohanana na tsy misy manohana…
Toerana no mahamaika? Tsy tonga namana vao mavomavo izay itadiavana fanohanana amin’izany, fa misy ny tonga mavomavo vao namana: efa tapi-dalan-kaleha amin’izay hahazoana seza vao hoe manohana an’itsy na iroa. Mbola misy manaiky ho tohatra fiakarana amin’ny fialokalofana?
Izay no manetsika sy manesika ny sasany; eny, an amin’izao firotsahan-kofidina ho solombavambahoaka izao aza. Tombontsoa manokana no mety ho zava-dehibe sy mahamaika? Tsy hitondra ny feo sy ny hetahetan’ny vahoaka, hanara-maso ny asan’ny governemanta, hanao lalàna…
Mila malina ny mpifidy fa izy no tompon’ny teny farany?